onlineakhabar.com: OMG !! पोखरामा बिश्वका बैज्ञानिकलाई चुनौति दिने खालका कार्य गरे यी बाबाले (Watch VIDEO)
Amazing News, Amazing World, Baba, Nepali News, Pokhara News » OMG !! पोखरामा बिश्वका बैज्ञानिकलाई चुनौति दिने खालका कार्य गरे यी बाबाले (Watch VIDEO)
OMG !! पोखरामा बिश्वका बैज्ञानिकलाई चुनौति दिने खालका कार्य गरे यी बाबाले (Watch VIDEO)
कतिपय कुरा सुन्दा मात्र बिस्वास लाग्दैन तर प्रत्यक्ष देखेपछि भने बिश्वास लाग्न सक्छ । बिज्ञानलाईनै चुनौति दिंदै पोखराको रामघाट स्थित नरनारायण बाबा आश्रममा ९ दिनका लागि सिद्धबाबा श्री वैष्णव कृष्णदासजी महाराज श्री रामानन्दाचार्य समाधिमा बसेका छन । उनले ९ दिन पछि मात्र आफूलाई बाकसबाट बाहिर निकाल्न भनेका छन् । उनि ९ दिन पछि निस्कने समय भनेको बैशाख ३ गते बिहान ९:४५ बजे हो । ‘ठिक त्यही समयमा मलाई झिक्नु होला, ढिलो गर्नुभयो भने मेरो ज्यान जान सक्छ,’ भन्दै समाधिमा बसेका थिए ।
त्यहाँ पुगेर प्रत्यक्ष हेर्ने मौका पत्रकार, चिकित्सक तथा भक्तजनले पाएका थिए भने धेरै व्यक्तिहरुले भने बाहिर राखिएको टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेका थिए । केहि समय पुजापाठ त्यसपछि हावा नछिर्ने काठको बाकसमा बसेर ध्यान गरी त्यस बाकसमा सुतेका थिए जुन बाकसलाई पछि माटोले पुरिएको थियो । आश्रम बाहिर मानिसहरुले जयजयकार गर्नुका साथै कतिपय भक्तजनहरु डाँको छोडेर रोएका थिए ।
उक्त बाबाका अनुसार आफूले आफ्नो मातृभूमिका लागि समाधिमा बस्न लागेको र एक नेपाली योगीले प्राप्त गरेको योगज्ञान हो जसकारण हाम्रो दर्शनले विश्व हल्लाउन सक्ने क्षमता राखेको समेत बताएका थिए । साथै यसरी बिना अक्सिजन बस्नु कुनै चमत्कार नभएर योगज्ञानका कारण भएको र भक्तजनहरुलाई ९ दिन सम्म नआत्तिएर बस्न समेत आग्रह गरेका थिए ।
Tags : Amazing News Amazing World Baba Nepali News Pokhara News